Savusavu, Vanua Levu, i-Fiji
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Costa
I-Island Breeze iyikhaya elingasemanzini ngokuphelele. Uma ufuna ikhaya lesimanjemanje elinobukhazikhazi elinokubukwa kolwandle, ichibi le-infinity, ulwandle egcekeni lakho, lilala abantu abangafika kwabayi-8, linekhishi lesimanje elihlanganisa umshini wokuwasha izitsha, amagumbi okulala angu-4, amagumbi okugezela angu-2, ipulani evulekile yokuhlala, indawo yokuhlala, i-inthanethi YAMAHHALA, I-SatelliteTV, i-smart TV engu-65 inch, amafeni osilingi kanye nesiphephetha-moya kuwo wonke amagumbi okulala khona-ke lena yindlu yakho. Jabulela ukubhukuda, i-snorkeling, ukutshuza & kayaking ngaphandle kokushayela noma yikuphi noma ukuthatha imoto engu-4WD noma itekisi
* Isikebhe kanye noKapteni bayatholakala ukuze bathathe izivakashi ziyodoba, i-reef snorkeling noma ukubona indawo.
* Ukudla kungalungiselelwa wena usanda kulungiselelwa ekhishini lakho (sicela unikeze isaziso samahora angama-24)
* Jabulela ukubhucungwa umzimba ngaphandle kokushiya ikhaya (sicela unikeze isaziso samahora angama-24)
* Ukuhlala kwengane
* Iklabhu yezingane - funda ubuciko bendawo nemisebenzi yezandla - obhasikidi bokweluka, ezemidlalo, ukubhukuda, ukuhlola izixhobo zamakhorali, i-kayaking nokudoba.
4.85(15 okushiwo abanye)
Leli khaya eliphambili lamanzi lihlala phakathi kwezihlahla zesundu endaweni ephephile nekahle ngasohlangothini lolwandle lwase-Savusavu. Njengoba ingaphambili lamanzi ngokuphelele ulwandle luyi-30mts kuphela ukusuka endaweni engemuva! Uma ufuna ikhaya elinemibono emangalisayo nokufinyelela okuqondile olwandle khona-ke lena yindlu yakho !!
I-Island Breeze inazo zonke izinsiza ongayilindela ekhaya likanokusho. I-decor ingeyesimanje futhi ihlotshiswe kahle.
Ukuba ngasohlangothini lolwandle kuyinzuzo enkulu njengoba kuhlale kunomoya omuhle nokubukwa okumangalisayo ingasaphathwa eyomsindo onesigqi wamagagasi eshaya phezu kolwandle olungaphandle. Lena indawo yeqiniso yeholide yasebhishi!
I-Island Breeze iyimizuzu emi-5 kuphela ukusuka elokishini laseSavusavu. Lapho ungafinyelela khona ezitolo ezinkulu, izitolo ezinhlobonhlobo kanye nemakethe yendawo.
Kungakhathaliseki ukuthi bangaki abantu ohlala nabo, i-Island Breeze ngeke izizwe iminyene njengoba kunezikhala eziningi zokuthi nihlanganyele ndawonye noma nifune ukuba uwedwa.
Indlu ingeyakho ngokuphelele.
Sinabo Abaphathi Bezindlu Nezakhiwo abazohlangana bakubingelele esikhumulweni sezindiza i-Savusavu. Ayatholakala 24/7 ukuphendula imibuzo yakho. Abahlali esizeni kodwa bangaxhunywana nabo ngocingo lwasendlini futhi bahlala imizuzu emi-2 kuphela!
Ngemali eyengeziwe bangakuhambisa ubone indawo, ukudoba, ukushushuluza, ukuhlinzeka ngokugada izingane, ukuhlela iklabhu yezingane/ imisebenzi, ukuluka izinwele, ukudla okuhlanganisa itiye lasekuseni nelantambama noma i-Lovo yendabuko - inyama nemifino ephekwe emhlabathini, ukudla kwasolwandle noma okusha. izinhlanzi. Uma kukhona okufunayo okuhlinzekiwe okungabaliwe ngicela uvele ubuze!
Sinabo Abaphathi Bezindlu Nezakhiwo abazohlangana bakubingelele esikhumulweni sezindiza i-Savusavu. Ayatholakala 24/7 ukuphendula imibuzo y…